Horudhac: Arsenal vs Leicester City… (Gunners iyo Foxes oo koox waliba ay guul u baahan tahay si ay u nooleyso rajadeeda afarta sare ee Premier League) – Gool FM
(London) 25 Okt 2020. Labo ka mid ah Kooxaha afarta sare rajada ka leh ayaa wada ciyaari doona caawa, marka ay Arsenal garoonkeeda Emirates ku soo dhoweynayso Leicester City.
Labada kooxood ayaa guulo soo gaaray Jimcihii tartanka Europa League, laakiin waxaa kaga horreeyey guuldarrooyin ay kala kulmeen Manchester City iyo Aston Villa kulammadoodii ugu dambeeyey ee horyaalka Premier League.
Taariikhda: Axad 25 Okt 2020
Arsenal ayaa qiimeyn doonta xaaladda Willian iyo Dani Ceballos, kuwaasoo dhaawacyo kaga maqnaa kulankii Rapid Vienna, halka Rob Holding uu la maqan yahay kulankan dhaawac muruqa ah.
Mesut Ozil iyo Sokratis ayaan lagu soo darin xiddigaha ay Gunners u xulatay inay kal ciyaareedkan uga qeyb-galaan horyaalka Premier League, laakiin Thomas Partey ayaa ku soo bilaaban kara kulankiisii ugu horreeyey ee ciyaaraha sare ee Ingiriiska.
Leicester City ayaa kormeeri doonta xaaladda Jamie Vardy, kaasoo dhibaato kubka ah ku seegay labadii kulan ee ugu dambeysay ee horyaalka iyo koobkaba.
Ricardo Pereira, Caglar Soyuncu, Daniel Amartey iyo Wilfred Ndidi ayaa ka dhaawacan kooxda martida ah ee dawacooyinka.
>- Arsenal ayaa guuldarro la’aan ah (unbeaten) 27-kii kulan oo ay garoonkeeda ku qaabisay kooxda Leicester City tartammada oo dhan, waxaana ay Gunners guuleysatay 20 ka mid ah kulammadaas.
>- Guushii ugu dambeysay ee Foxes ay ka gaarto Arsenal waxay ahayd 1973-kii, inkastoo ay soo afjareen 12 guul darro oo xiriir ah horyaalka oo ku soo gaartay meel ka baxsan garoonkeeda markii ay barbaro 1-1 ku soo galeen Emirates xilli ciyaareedkii hore.
>- Arsenal ayaan garoonkeeda guuldarro kula kulmin horyaalka Premier League sanadkan 2020, waxaana aan laga adkaan 11 kulan tan iyo guuldarradii ka soo gaartay Chelsea 29-ka bishii December, waxaana ay haysataa Gunners tan iyo markaas 9 guul iyo 2 barbaro.
>- Leicester City ayaa guuldarro la kulmi karta saddex kulan oo xiriir ah horyaalka markeedii ugu horreysay tan iyo bishii Febraayo sanadkii 2019-kii, taasoo ku hoggaamisay inay cayriyaan macallinkoodii Claude Puel.
>- Sidoo kale Foxes waxay guuleysan karaan saddexda kulan ee ugu horreeya horyaalka xilli ciyaareedka ee ay bannaanka ku ciyaarayaan markii ugu horreysay.
>- Brendan Rodgers ayaa guuldarro la’aan ah dhammaan todobadii kulan ee ay kooxdiisu marti ahayd isagoo macallin ah uu wajahay Arsenal tartammada oo dhan, waxaana uu ka haystaa 3 barbaro iyo 4 guuldarro.
>- Jamie Vardy ayaa ka dhaliyey Arsenal 10 gool oo Premier League, kaliya Wayne Rooney oo Gunners ka dhaliyey 12 gool ayaa ka badan.
>- Arsenal ayaa guuleysatay siddeed ka mid ah sagaalkeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka Premier League.
>- Gunners ayaa guuldarro la kulmin 10-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda Emirates ku qaabishay Leicester City tartammada oo dhan.
>- Arsenal ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool afarteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka Premier League.